जनकपुर : घाँटीमा छुरा हानेर एक जनाको हत्या !
शर्मालाई को र किन हत्या गरेको बारे प्रहरी अनुसन्धान थालेको हो ।
प्रकाशित मिति : २२ भदौ, २०७६ , २२:०१:०० बजे
न्यूज ब्यूरो, जनकपुरधाम । आईतबार बेलुकी छुरा हानेर एक जनाको हत्या भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ ।
प्रदेश नं. २ को धनुषा जिल्ला मिथिला बिहारी नगरपालिका वडा नं. ९ कटरैत बस्ने एक पुरुषलाई अज्ञात व्यक्तिले छुरा प्रहार गर्दा उनको मृत्यू भएको प्रहरीले जनाएका् छ । तारापट्टि बजारबाट बेलुकी करिब सवा ८ बजे तरकारी किनेर आफ्नो जाँदै गर्दा मिथिला विहारी नगरपालिका वडा नं. ८ कचुरी नजिकै भित्री सडकखण्डमा २ जना अज्ञात व्यक्तिले मोटरसाईकलमा आएर वडा नं. ९ कटरैत बस्ने अन्दाजी ६५ बर्षिय राम वरण शर्माको घांटीमा छुरा प्रहार गरी फरार भएको प्रत्यदर्शीहरुलाई उदृत गर्दै ईलाका प्रहरी कार्यालय धनुषाधामले जनाएको छ ।
स्थानीय प्रमोद गिरीका अनुसार तारापट्टि बजारबाट तरकारी लिएर घर फर्कैदा गर्दा कचुरी र कटरैत सडकखण्डमा उनलाई छुरा प्रहार गरिएको जानकारी दिए । स्थानीयहरुका अनुसार छुरा प्रहारबाट मृत्यू भएका शर्मा मिथिला बिहारी वडा नं. ९ कटरैतका बासी हुन् । यता, घटनाको खवर पाएलगत्तै जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाको टोली घटना स्थल पुगी मृतकको शवलाई पोष्टर्माटमको लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल पठाएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाका प्रहरी प्रवक्ता एवम् डिएसपी रामेश्वर कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
प्रत्यदर्शीका अनुसार पहेलो मोटरसाईकलमा गएका दुई जना अज्ञात व्यक्तिले शर्मा उपर छुरा प्रहार गरी भागेको थियो । उनको घाँटीको नली काटीएपछि तत्कालै उनको मृत्यू भएको जनाइएको छ । यसबारे थप विवरण आउन बाँकी छ भने प्रहरी यसको अनुसन्धानमा खटेका छन् । शर्मालाई को र किन हत्या गरेको बारे प्रहरी अनुसन्धान थालेको हो ।